MOVILFRIT ▷ Biyaha ugu Wanaagsan iyo Shiilan Saliida | Fikradaha iyo Qiimaha Lux 5
Saliida Movilfrit iyo Fryer Biyaha
Ma taqaanaa Fryers leh nidaamka biyaha iyo saliidda? Inkastoo ay aad ugu badan yihiin isticmaalka warshadaha, Movilfrit sidoo kale waxay iibisaa moodooyinka kaaga isticmaalka guriga.
Maqaalkan waxaan si qoto dheer u falanqeyneynaa noociisa ugu iibinta badan taasna waxaan arki doonaa tilmaamihiisa, waxqabadkeeda iyo faa'iidooyinkeeda, ra'yiga dadka isku dayay iyo qaar kale oo badan.
Markaad dhammayso akhrinta waxa kuu caddaan doonta in shiilankaaga uu yahay waxa aad uga baahan tahay gurigaaga iyo xageed ka iibsan kartaa at qiimaha ugu fiican online. U bax
Daawo Bixinta Hadda La Heli karo
➤ Astaamaha Muuqda Movilfrit Deep Fryer
Si aan u bilowno, sida caadiga ah, waxaan arki doonaa sifooyinka ugu muhiimsan ee qalabkani ku daro nidaamkoodu noo ogolaado Si fiican u isticmaal saliidda shiilan.
▷ 5 Litir Awood
Ogow in MOVILFRIT 117.054 Lux 5 leeyahay awoodda shan litir Waxaa laga yaabaa inaysan wax badan kuu sheegin, laakiin haddii aan kuu sheegno in awooddani ay oggol tahay shiil 3/4 qaybood oo baradho ah ugu badnaan, Way kuu fududdahay inaad fikrad ka hesho inta cunto ee aad hal mar diyaarin karto.
Shanta litir ee lagu dhawaaqay waxay tilmaamayaan awoodda haanta, oo ay tahay in la buuxiyo 4 litir oo saliid ah iyo 1 litir oo biyo ah.
▷ 2000 Watts oo Awood ah
Lux 5 Fryer wuxuu ku qalabaysan yahay iska caabin koronto oo awoodiisa ugu badan ay tahay 2000 watts, cabir ku filan si loo helo. shiilan wanaagsan dhammaan noocyada cuntada.
Mid ka mid ah waxyaabaha u gaarka ah qalabkani waa kaas waxaan nidaamin karnaa dhererka taas oo iska caabintu ku dhex milmay saliidda. Tani waxay ogolaataa u hagaaji si waafaqsan inta cunto in aanu karsanayno, si kulaylku ugu dhawaado iyaga iyo waa ka hufan oo degdeg badan.
▷ Sidee loo nadiifiyaa?
Haanta ka samaysan birta aan saliida lahayn xaglo la'aan iyo suurtagalnimada in la kala diro caabbinta ka dhig nadiifinta mid aad u fudud ee shiilan. Sida ay summadu xaqiijisay, haanta iyo dambiisha cuntada iyo midka qashinka qaada labadaba ku rid makiinada weelka dhaqda dhaqid.
mobilfrit Lux 5 waxa uu ku qalabaysan yahay heerkulbeeg rotary analoog ah kaas oo ogolaanaya habbee heerkulka inta u dhaxaysa 60 iyo 200 digrii sentimitir si aan ula jaanqaadno nooca cuntada aan u baahannahay inaan ku karsano. Nidaamka amniga ahaan waxaa ka mid ah a heerkulbeegga oo leh dib-u-dejin gacanta ah heerkulbeeg heerkul ah 230 digrii.
Inkastoo ay aad u badan tahay fududahay in la isticmaalo, saacada si toos ah u xidhma ayaa maqan.
Qalabka yari wuxuu leeyahay a shaqo adag oo qurux badan waxayna ka kooban tahay haanta, dambiisha cuntada, taageerada caabbinta iyo daboolka.
Taangiga 5-litir ee ka samaysan birta aan lahayn ayaa leh cago aan simbiriirixan lahayn, un muraayadda aragga heerka iyo tuubada xagga hoose si aad u nadiifiso haraaga ama aad u faaruqiso gebi ahaanba.
Taageerada nidaamisa dhererka caabbinta waxay ka samaysan tahay balaastiig sidoo kale waxaa ku jira heerkulbeegga, iftiinka korontada, fiilada korontada iyo muraayad xariir leh talooyinka heerkulka cuntooyinka qaarkood.
Halka ay run tahay in ay keento a dabool caag ah, tan lama isticmaali karo xilliga shiilan mana ka fogaan karno firirka xilliga shiilan.
Qiyaasaha: 25,8 x 25,5 x 31 cm
Miisaanka faaruq ah: 4 kilo.
Dammaanadda ayaa daboolaysa dhibaatooyinka ka dhashay cilladaha wax soo saarka ee ay sababaan a muddo laba sano ah, sida uu dhigayo sharciga Isbaanishka.
➤ Movilfrit Lux 5 Qiimaha Fryer Deep
Qiimaha qaabkani waa mid aad u badan ka sarreeya shiilanyada caadiga ah, maadaama ay ku taal wax yar oo ka sarreeya 200 euro. Waxaad ka arki kartaa qiimaha saxda ah ee ay hadda ku iibinayso halkan:
Eeg Qiimaha Movilfrit
Fryeriyaha korantada wuxuu gaaraa awood dhan 2000 W
Waxay leedahay qaab wareegsan waxayna leedahay dabool wax ku ool ah si ay uga baxdo gudaha si fiican loo ilaaliyo
Waa shiilan qoto dheer oo ku habboon in lagu kariyo 4 qof ama ka badan
Nidaamka saliidda biyaha, waxay leedahay cabbirro 25.8 x 25.5 x 31 cm iyo culeys 4 kiilo ah.
Movilfrit F-5 Fryer
Iibka waxa aad heli doontaa:
Iska caabin la hagaajin karo
Waxaad si gaar ah u iibsan kartaa:
Basket Qashin Adag
➤ Sidee u shaqeysaa? Tilmaamaha Fiidiyowga
Waa maxay habka ugu wanaagsan ee lagu fahmo sida nidaamkani u shaqeeyo marka loo eego daawashada fiidiyowga habka oo dhan.
➤ Movilfrit Fikradaha Fryer Deep Fryer iyo Gabagabada
Movilfrit ee biyaha iyo saliidda waxay nooga muuqataa ikhtiyaar wanaagsan isticmaalayaasha u socda si joogto ah u isticmaal dhowr jeer todobaadkii si aad shiil cuntooyin kala duwan. Haddii aad marmar kaliya isticmaasho shiilan ama aad samayso shiilan faransiis ah, uma qalmo kharashka badan ee qalabkan.
Inkasta oo ay tahay nooc wax ku ool ah oo si fiican u shiilan oo bixiya natiijooyin wanaagsan, qiimihiisu waa sarreeyaa mana dhaawacayaan haddii lagu daro shaandhada wasakhda iyo in ay hagaajisay nidaamka xakamaynta, oo ay ku jiraan ugu yaraan saacad leh xirid toos ah.
▷ Faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay leeyihiin Biyaha iyo Shiilan Saliidda
Iskuma qasin dhadhanka
Xoog badan oo degdeg ah
Ma jiro barnaamij ama saacad
Waxaan ka jawaabeynaa su'aalaha caadiga ah, haddii aad wax qabtid ha ka waaban inaad faallo ka bixiso hoos.
Immisa jeer ayaa biyaha la beddelaa?
Waqtigu aad buu u kala duwan yahay iyadoo ku xiran inta jeer ee la isticmaalo.
Goormaad milixdu dhigtaa?
Biyuhu waa inay lahaadaan qayb milix ah oo lagu tilmaamay buug-gacmeedka, haddii aan biyaha dib u cusboonaysiinno waa inaan ku darnaa milix si loo ilaaliyo.
Intee in le'eg ayay saliiddu jirtaa?
Way ka dheer tahay kuwa caadiga ah, laakiin waxay ku xidhan tahay isticmaalka, nooca cuntada la kariyey iyo heerkulka la isticmaalo. Waa in aynaan iloobin in mar kasta oo heerkulku sarreeyo, in badan oo saliidda ay hoos u dhigto.
Ma la isticmaali karaa filtar la'aan?
Shaandheeyaha wasakhdu daruuri uma aha hawl-galkeeda.
➤ Iibso Movilfrit Lux 5 Fryer Biyo
Haddii lagugu qanciyay faa'iidooyinka alaabtan, waad awoodaa online ka iibso oo ka soo qaado guriga:
Soo iibso Movilfrit Fryer kaaga
(Codadka: 13 Celcelis: 4.2)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » Saliida Movilfrit iyo Fryer Biyaha
48 comments on "Movilfrit Saliida iyo Biyaha Fryer"
16 / 06 / 2019 at 16: 30
Maxaan u helaa baradho saliid leh?
17 / 06 / 2019 at 11: 40
Hi, taasi badanaa waxay dhacdaa marka lagu shiilo heerkul aad u hooseeya oo saliid ah. salaan
11 / 07 / 2019 at 15: 46
Salaan, waxaan haystaa shiilan qoto dheer oo mararka qaarkood marka aan shiilo labaad gelinayo, saliiddu way kacdaa marna way soo baxdaa, waxay kor u kacdaa samaynta xumbo badan ma fahmin sababta ay taasi ku dhacdo, waxaan jeclaan lahaa qof inuu bixiyo. xog wanagsan baan ahay.Mahadsanid.
09 / 09 / 2019 at 08: 15
Haddii aad xabbad salaar ah dul saarto, saliiddu kama soo baxayso.
15 / 07 / 2019 at 12: 06
Waxaan soo iibsaday mobil sanad ka hor
Marka caabbinta kor u kacdo, dambiishu waxay ku dhacdaa midigta ... taas oo macnaheedu yahay in cuntada dhinacaas ku jirta oo kaliya la shiilay, inta soo hartayna ay sii ahaanayso ceeriin ... cuntadu waxay ku hadhaysaa gunta hoose ee dambiisha. Gaar ahaan baradhada. Waxaan dhigayaa saliidda ilaa calaamadda ugu yar, xitaa si saliidda ay u buuxdhaafto heerkul kasta ... maxaan sameeyaa? Runtu waxa ay tahay aad ayaan uga niyad jabay... raqiisna maaha.
16 / 07 / 2019 at 09: 54
Hi Carla. Waa badeecad weli ku hoos jirta dammaanad. Taladeenu waxay tahay inaad marka hore la xidhiidho iibiyaha ama guriga laftiisa. Salaamu calaykum
16 / 10 / 2021 at 16: 44
Waayo-aragnimadayda, haddii ay buux-dhaafto waa sababta oo ah in la geliyo saliidda ugu yar marka heerka hoos u dhaco waxay ku dartaa biyaha oo qulqulaya! Saliida dhig ilaa inta ugu badan!!
20 / 08 / 2019 at 13: 48
marka biyaha laga soo tuuro shiilan; Sideen ugu daraa biyaha iyo milixda? Mise waa in aan saliidda mar kale miiraa oo aan dib ugu celiyaa koolkoolinta? ama waxaad ku shubtaa biyaha iyo milixda saliidda korkeeda; Fadlan ka jawaab su'aashan, mahadsanid iyo galab wanaagsan.
21 / 08 / 2019 at 08: 52
Hello. Waxaad ku dari kartaa saliidda sababtoo ah biyuhu waxay hoos ugu dhacayaan xagga hoose. Salaamu calaykum
01 / 09 / 2019 at 18: 03
Ma furi karo kabaalka qashinka qashinka, maxaan sameeyaa?
11 / 09 / 2019 at 12: 59
Waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto adeegga farsamada ee astaanta. Nasiib
03 / 10 / 2019 at 20: 21
WELI MA IIBSAN. Waxaan jeclaan lahaa in aan ku sameeyo qalabka si aan u ururiyo qashinka adag. WAA MAXAY QIIMAHA AY LEEDAHAY?
10 / 10 / 2019 at 17: 36
Hi Pepe, waxaad ka arki kartaa isku xirka arag bixinta. Salaamu calaykum
25 / 11 / 2019 at 12: 40
Hello, waxaan hayaa 9 sano oo aan ku faraxsanahay, sidoo kale walaashay waa iibsatay wakhtigaas, laakiin hadda waxay siisaa casiraad, ma garanayso sababta, shalay waxay siisay naxdin xoog leh, ma waxay noqon kartaa wax ay ku fashilantay. ? Mahadsanid.
25 / 11 / 2019 at 12: 50
Hello Eva. Tani waa shunt, taas oo ah, qulqulka hadda socda ee jirka birta ah. Waxay noqon kartaa cillad ku timaada iska caabiyeyaasha ama heerkulbeegyada ama silig qaawan oo fudud oo taabtay birta. Marka la soo koobo, waa inaad dib u eegtaa sababtoo ah waa khatar. salaan
29 / 11 / 2019 at 13: 47
assalaamu calaykum, 8 sano ayaan haystay oo cajiib ah, laakiin shalay ayaan soo faaruqiyay si aan u xoqo, hadda biyihii ayaa ka dhammaanaya. Tan iyo maalin ka hor, waxaan horeba u arkayay xoogaa saliid ah miiska miiska, ma garanayo in ay jiri doonto wax daadsan, sababtoo ah waxaan furay oo xiraa tuubada oo aan ogaanin cillad. ma iga caawin kartaa inaan xal u helo. Mahadsanid
23 / 12 / 2019 at 14: 28
Waxaa fiican inaad la xiriirto adeegga farsamada. Nasiib
30 / 03 / 2020 at 18: 47
Taas oo kale ayaa igu dhacda, wax aan sameeyona ma garanayo
25 / 01 / 2020 at 20: 08
Heerkulkee ayaa baradhada si fiican loo shiilay
05 / 02 / 2020 at 20: 53
Hello. 170/175 digrii waa heerkulka ugu fiican. salaan
25 / 03 / 2020 at 14: 20
Baradhadayda ayaa si aad ah u fool xun ugu soo baxa foornada, dhammaantood si fiican ayey u shiileen, laakiin baradho ma leh, waxaan u qaaday adeegga farsamada, anigoo u maleynaya in heerkulku aanu xitaa sax ahayn, waxay beddeleen gabal, laakiin weli waa sidaas oo kale. Mahadsanid
12 / 03 / 2020 at 15: 43
Sababtoo ah marmarka qaarkood saliiddu waxay soo baxdaa marka ay heer hoose tahay marka la bilaabayo kuleylka. Way karaysaa oo ka baxdaa Kuuba.
27 / 04 / 2020 at 17: 31
Salaan, sida ay noo sheegeen Movilfrit, haddii marka aynu biyaha gelinno in yar oo gaaban, way kululaan karaan oo karkarin karaan. Samee tijaabada adiga oo biyaha ka keenaya heerka ilaa 1,5 ama 2 cm si taas looga fogaado. Salaamu calaykum
24 / 04 / 2020 at 21: 45
Salaan sababtoo ah saliidda inta ugu yar ayaan ka dhigayaa wayna buuxdhaaftaa marka la shiilo waligay ma awoodin inaan buuxiyo ilaa ugu badnaan waxay noqon lahayd fadeexad mahadsanid
27 / 04 / 2020 at 17: 30
18 / 07 / 2020 at 20: 28
Waxa aan soo iibiyay shiilankii, waxaan ku daray biyihii iyo saliidii oo aan ilaabay in aan milix ku daro. Ma ku dari karaa anigoon faaruqin.
20 / 07 / 2020 at 10: 30
Hello, kaliya waad faaruqi kartaa biyaha oo haddana buuxin kartaa, maadaama ay ka soocday saliidda oo ay hoos u dhigto. salaan
11 / 08 / 2020 at 09: 33
45 sano ayaan shiilan haayay, waxaan rabaa in aan talo ka bixiyo, marka aan biyaha bedelno, inta aan la samayn mid cusub, marka hore ka saar dambiisha iyo caabbinta, ka dibna shaandhada qashinka ururisa, ku dar biyaha milix iyo waxaan ka dhigi doonaa Sidoo kale koob qaxwo khal ah haddii biyuhu leeyihiin lime badan, beddel filtarka marka la quusiyo ay nadiifiso saliidda, ka dibna iska caabbinta iyo ugu dambeyntii dambiisha shiilan. Waa inaad u ogolaataa dhawr saacadood in biyuhu hoos tagaan oo saliiddu kor u kacdo. Waxaan had iyo jeer marka hore qaboojiyaa baradhada ilaa 130º, bandhi oo diyaar u ah inay shiilaan marka wakhtigu yimaado 170-180º, waxaan ku dhejiyaa dambiisha oo gacanta ku shubaa wax yar oo yar, dambiisha laguma buuxin karo dusha sare haddii baradhada ayaa fool xun, sababtoo ah noocyada kala duwan ee baradhada, kuwa ugu fiican ayaa ah fasalka "Agria", ama Pontiac Red ama Kanabec. Mona lisa isla markiiba waa la gubay. Way ku fiican tahay shiilan squid a la romana, xurros barafaysan (waa la shiilay iyada oo aan baraf laga dhigin, laakiin tiro yar. Waxa kaliya ee aanan isticmaalin waa la dubay oo la dubay, marka la dhammeeyo waxay ku hadhaysaa sabaynta saliidda mana tagin. Waxaan shiishaa baradhada si aan u sameeyo omelet, waxaan ku kariyaa 130-140. Waxaan hayaa tan iyo markii ay bilaabeen inay ku iibiyaan dukaamada martida, usbuucan qasabaddaydii way jabtay dayactirkuna aad buu qaali u yahay, waa inaan sameeyaa. badal oo si dabiici ah ayaan u iibsan doonaa mid la mid ah.
Waxaan rajeynayaa in waayo-aragnimadayda ay caawiso kuwa haysta.
11 / 08 / 2020 at 18: 07
wooow ¡¡Waad ku mahadsan tahay faallooyinkan oo kale, waa hubaal inay waxtar u leedahay isticmaalayaasha kale. salaan
18 / 08 / 2020 at 13: 04
Waan ku raacsanahay wax kasta oo ay tidhi Rosa M.
Waxaan haystay ilaa 10 sano waana ku faraxsanahay.
Waxaan isticmaalaa shaandho la'aan. Waxay ila tahay mid aan loo baahnayn.
Nadiifintu aad bay u fudud tahay aniguna shakhsi ahaan si joogto ah ayaan u sameeyaa aniga oo faaruqinaya biyaha iyo saliidda labadaba, kuwaas oo aan dib u warshadeeyo "haddii aysan aad u wasakh ahayn." Oo tubbada iyo dambiishii labadaba waxaan ku riday weel-dhaqiyaha, taas oo ah meesha ugu wanaagsan ee la nadiifiyo.
Had iyo jeer waxaan isticmaalaa saliid saytuun ah. Ma jiraan saliido kuwan ah oo sheegaya in ay gaar u yihiin shiilitaanka. Hal mar ayaan isticmaalay oo waxay ahayd mid adag, dhegdheg leh. ?
Mawduuca baradho waa run waxa Rosa tiri. Furaha ayaa ku jira nooca baradhada ee la isticmaalo. Dhammaantood kuma fiicna shiilan.
Guriga ma cunno wax badan oo shiilan laakiin waxaan doorbidaa inaan isticmaalo Movilfrit halkii aad ku shiilan lahayd sababtoo ah waxay si fiican u koontaroolaysaa heerkulka saliidda.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan ku talinayaa iyada oo aan shaki lahayn.
20 / 08 / 2020 at 21: 56
Aad baad u mahadsantahay Juana, wax ku biirin kale oo weyn!
26 / 11 / 2020 at 09: 20
Waxaan isticmaalayay in ka badan labaatan sano, dhammaantoodna waxay ku dhammeeyaan bus ka soo baxa qashinka, tan dambe ee nadiifinta ugu horreysa oo aan hore u sii daayay si aan u faaruqiyo iyo qoyskayga oo dhan waxay la mid yihiin godka laga baxo. guf waa ka kaliya ee aad uga cadhaysiiso hoos-u-dhac ku yimaada habka haddii kale wax dhibaato ah ma qabo
16 / 09 / 2020 at 12: 46
Faalladeydii hore ee ku saabsan fryer-ka, waxaan lahaa yaabab, waxaan haystay 45 sano xagaagan tuubada ayaa jabtay, dayactirkuna aad ayuu qaali u ahaa, waan tuuray oo waxaan go'aansaday inaan mid cusub iibsado. Go'aan xun!!, Tolow ma aan hagaajin lahaa. Mid baan ka soo iibiyay Maxkamaddii Ingiriiska, markaan imid, waxaan arkay dambiisha oo tayadeedu liidato iyo gacanteeda oo baco ka samaysan, tii horena waxay ka samaysan tahay Bakelite, Ilaahayna way ku baxday, wayna caawisay in gacanta lagu rido oo la saaro, dabool sidoo kale ka samaysan baco oo aan lahayn dambiishii qashinka lagu ururiyo. Gabal si kor loogu qaado oo loo yareeyo heerka dambiisha, oo sidoo kale laga sameeyay caag. Maalintii xigtay ayaan u celiyay. Hadda waxaan eegayaa online haddii aan heli karo, laakiin waa isla tayada ay ahayd. Anigoo aad uga xun waxaan shaki galiyay qaabkan cusub.
17 / 09 / 2020 at 11: 58
Waa ceeb, mahadsanid faallooyinka.
24 / 10 / 2020 at 22: 31
Waxaan iibsaday 1 bil waana ku faraxsanahay natiijada shiilan, laakiin su'aal ayaan qabaa…. Waxaan rabaa inaan beddelo biyaha mana garanayo sida saxda ah ee loo sameeyo, faragelintana waxba ma jiraan. ku saabsan, ma i caawin kartaa?
04 / 11 / 2020 at 15: 48
Wali waxaan raadinayaa fryer leh dambiil la mid ah kan fiidyowga ku jira mana heli karo, ma ila tali kartaa halka aan ka helayo.
Waa maxay farqiga u dhexeeya Lux5 iyo F5, waxaan rabaa kan ugu fiican.
06 / 11 / 2020 at 18: 09
Waxaan weydiiyey saaxiib aan istcmaalin oo aan ka xumahay in aan idhaahdo wax walba waa qumman yihiin marka laga reebo cilladda naqshadda weyn ee sababta saliidda inay ku saydho dhammaan agagaarka mashiinka shiilan, taas uma iibsan doono. Saliid ka buuxo, aad bay u culus tahay in la dhaqaaqo waana in ay qaboojiso, dabcan si ay u awooddo.
23 / 11 / 2020 at 14: 48
Hi waxaan haystaa shiilan qoto dheer muddo dheer.
Laakin waxaan qabaa su'aal igu dhacda mar mar oo aanan garaneyn sababta.
Marka ay qaboojiso waxaa looga tagayaa lakabka burka ah ama hadhaaga kaliya ee ku yaal cidhifka saliidda. Ma garanayo waxa mudan.
Marar kalena waan isticmaalo oo iguma dhacdo. Waa mararka qaarkood oo la isticmaalo calaamad isku mid ah oo saliid ah.
Ma laga yaabaa in qof ii sheego waxa ay noqon karto?
29 / 11 / 2020 at 21: 18
Hello, hadda waan iibsaday sababtoo ah deriskaygu waxay la joogeen sanado aad ayayna u faraxsan yihiin…. Dhawr jeer ayaan keligay u isticmaalay weli… Laakin way damaysaa…. Iska caabintu way iga booddaa, waxaan ku xidhaa meesha aan ku xidho. Aniguna madaxa ayaan ka dhigaa ... ma garanayo sababta. Oo waxaan isku dayay mid ka mid ah deriskayga gurigayga oo uu la boodo, markaa qaladka shiilaheyga ma aha. Ma awooda darted ??? Waa iga yaabisay sababtoo ah jikada waxaan ku xiraa dhammaan qalabyada, taasna weligeed iguma dhicin. Waxaan sugayaa jawaabaha Mahadsanid
16 / 03 / 2021 at 10: 08
Waxay leedahay dhammaan calaamadaha ahaanshaha sababtoo ah awoodda.
Waxay leedahay dhammaan calaamadaha ahaanshaha sababtoo ah awoodda. Si aad meesha uga saarto, isku day guriga deriskaaga si aad u aragto inuu halkaas ku boodo iyo in kale.
04 / 03 / 2021 at 20: 04
Waxa igu dhacay wax ka yar bil, mana cadda inta jeer ee aan beddelo saliidda. Waxaan isticmaalaa 3/4 jeer todobaadkii.
27 / 08 / 2021 at 03: 06
Waxaan iibsaday dhowr bilood ka hor, runtu waxay tahay inaan ku faraxsanahay laakiin waxaa jira hal shay oo aanan fahmin, markaan baradhada shiilayo waxay ku dhegaan dambiisha, wax kasta oo kale waa qumman yihiin laakiin baradhada waxaan haystaa dhibaatadaas. Sababtoo ah waxay noqon kartaa?
01 / 09 / 2021 at 18: 01
Galab wanaagsan, tani waa faallooyinkaygii saddexaad. Ugu dambeyntii waxaan soo iibsaday shiilankii qoto dheer, carruurtaydu way ka bixi lahaayeen jidkooda haddaanan iibsan, ma rabaan inay ka dhammaadaan squid, xurros, shiilan faransiis iwm…. Tayadu aad bay uga duwan tahay tayda 1974, laakiin waan ku qanacsanahay. Laga soo bilaabo kii hore, waxaan hayaa dambiilaha qashinka, dambiisha, laakiin kuma haboona, waa inaan isticmaalo midka cusub iyo daboolka, oo ka samaysan Bakelite.
Sanado badan waxaan jeclaan lahaa inaan talo ka bixiyo, faallooyinka aan akhrinayay, haddii aad iibsato, sidoo kale waxaan iibsaday dambiilaha qashinka ah, waxay ka caawisaa in la shiilo nadiifiyo marka biyaha la beddelo, iska caabbinta ayaa laga saaraa. , dambiisha ay wasakhdu ku jirto, maydh oo inta ay engegayso, fur tuubada si aad biyaha uga daadiso, ilaa saliiddu ka bilaabato inay soo baxdo, xidh oo mar kale ku samee litirka biyaha hal qaado oo milix ah, laba ayaa aad u badan iyo koob. Kuwa kafeega khalka ah, waxaa loogu talagalay nuuradda biyaha, haddii magaaladaada ay ku adag tahay. Ku dhajinta dambiisha, markaad hoos u dhigto waxay nadiifisaa saliidda wasakhda, ha nasato ugu yaraan laba saacadood ka hor inta aanad u soo noqon si aad u isticmaasho si aad u dejiso. Marka aan rabo in aan nadiifiyo haanta, waxaan ka soo saaraa caabbinta, dambiilaha, biyaha, biyaha tuubada, waxaanan saliidda ku shaandheyneynaa shaandheyn fiican oo dheri ah, ilaa aad aragto huurka ku haray saliidda gunteeda. ceelkan ayaa tuuray.
Waxaan ku nadiifiyaa gudaha taangiga saabuun iyo biyo, waan raaci oo si fiican u qalaji oo waxaan sii wadaa buuxinta mar labaad, dhammaan maaddooyinka, markaan tan sameeyo waa inaan ku daraa saliid cusub oo shiilan ayaa diyaar u ah inuu isticmaalo. mar kale.
Waxaan jeclaan lahaa in aan siiyo soo saaraha xoogaa talo ah oo iga cafi geesinimadayda, laakiin waxaan oggolahay 45 sano oo aan isticmaalay, heerka saliidda maaha mid sax ah ugu yaraan kuwa guriga ku isticmaala oo aan u maleynayo inay yihiin kuwa ugu badan, MARNA buuxa ama xitaa ilaa heerka ugu hooseeya, had iyo jeer sentimitir ka hooseeya heerkaas, haddii wax badan oo isticmaalayaasha ahi aysan dhicin, marka cuntada la gelinayo saliiddu waxay ku qulqulaysaa dibadda, waa inay hagaajiyaan heerka, fikradeyda suubban. Dadka qaarkiis waxay ka cawdaan gacanka aan ogolayn in daboolka la xidho, waxa caadiga ah waa in la isticmaalo oo keliya marka la karinayo ka dibna laga saaro, waxaan ku hayaa khaanad, daboolku waa inuu ka ilaaliyo saliidda wasakhda marka la karinayo. aan la isticmaalin.
Fikradahani waa natiijada waayo-aragnimadayda dheer ee shiilan, qaarna waxaa i siiyay soo-saaraha oo saaxiibo dhow la ahaa waalidkay.
16 / 09 / 2021 at 21: 01
Waxaan haystaa Lux 5 fryer muddo 4 sano ah oo si lama filaan ah ayaan u socdaa. Biyaha iyo milixdu waa amber, inkastoo waalka uu xiran yahay, qulqulo joogto ah oo biyo ah ayaa ka soo baxa biyaha iyo godka saliidda. Ma iga caawin kartaa inaan xalliyo dhibaatada. Mahadsanid.
05 / 03 / 2022 at 10: 36
Saliidda Freire aad bay u uraysaa, marar badanna waan beddelaa. Waxaan haystaa filtar...kan qofna ma ku dhacay?
17 / 03 / 2022 at 19: 32
Salaan, waxaan haystaa shiilan oo waa markii labaad oo wax yar ka dib beddelka saliidda, ka dib nadiifinta, mar kasta oo aan shiilo, uu aad u xun yahay. Wixii qabow ayaa dhadhan fiican leh, laakiin urta waa dami. Qof ii sheegi kara waxa ay sabab u tahay? Saliiddu waa gabbaldayaha.
Waxaan u isticmaalaa hilibka rootiga iyo baradhada.
23 / 03 / 2022 at 16: 49
Galab wanaagsan. Ma isticmaali karaa saliid gabbaldayaha halkii saliid saytuun ee shiilaheyga movilfrit? Mahad badan